Yini engingayenza ngezinhlu zami zomkhiqizo ku-Amazon.com ngokubeka inqubekela phambili?
Uma kuziwa ekuthatheni imali engenziwanga imali i-Amazon.com nokuhola ukuhola ngenqubekela phambili ehlala njalo, ifomula lemfihlo lempumelelo lihlanganiswe ekusesheni komkhiqizo okholayo. Ngisho ukuthi ukuhlala ngaphambi komdlalo ku- i-Amazon - kanger pro tank rebuild.com enokubonakala ukuthi ibonakale phezulu kwesiteleka semakethe - konke okudingayo ukulungisa ngokugcwele uhlu lwakho lomkhiqizo. Kodwa ubuqili ukuthi ukuthi konke okukhona kufanele wazi ukuthi ncamashi futhi kuphi lapho kwenziwa ngokuqondile lapho uhambisa noma yikuphi ukulungiswa kohlu. Nansi indlela ongayenza ngayo - sebenzisa umhlahlandlela omfushane olandelayo ukuze ube nokugxila okuqondile kusukela ekuqaleni, ngaphandle kokuchitha ngisho nomzuzu wesikhathi sakho esiyigugu noma umzamo omncane kakhulu.
Ukuhlelwa kokufakwa kuhlu ku-Amazon
Uma usuvele udlala kahle ne-Search Engine Optimization (SEO), kufanele ube ncane - Ama-SEO aphezulu abanekhono athi, okuqukethwe kuhlale kuyinkosi. Ngiyasho ukuthi mhlawumbe noma yikuphi okuqukethwe kombhalo ongayithola kwiWebhu yilokho okuvame ukwenza ukuphumelela okuphumelelayo okudingekayo ukubonakala kwe-Inthanethi kangcono. Futhi konke okuqukethwe okwenziwe ngokufanele ku-kuphenduka kuvela ekusebenziseni okuhlakaniphile nokubekwa okulungile kwamagama angukhiye abalulekile. Ngakho-ke, uma ufuna ukubona uhlu lwakho oluhle kakhulu ku- i-Amazon.com kanye nezinzuzo zakho zokubala ezizalwa nge-spoon yesiliva - ukuphatha ucwaningo olunzulu lwegama elingukhiye kufanele kube inombolo yakho yesinyathelo ngaphezulu.
Igama elingukhiye lokucwaninga
Ngakho-ke, ake sibhekane nalo - ukukhethwa kwegama elingukhiye elibaluleke kakhulu kubaluleke kakhulu ukwenza uhlu lwakho lwemikhiqizo lube phezu kwe- i-Amazon.com phezulu kokusesha bukhoma bukhoma. Yingakho ukuqhuba ucwaningo lwegama elingukhiye elizuzisa ngempela ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi kakhulu, ngincoma ukusebenzisa elinye lamathuluzi okucinga: I-Google Keyword Planner (kuhle ukuqala ngama-classics amasha adala mahhala futhi anethemba elihle kakhulu le-Pay-Per yakho elandelayo -Chofoza umkhankaso), kanye namazwi omthengisi, i-AMZ Tracker, i-Scope, kanye no-20 (igama) elingukhiyeTool.io (khetha nje owokuqala owuthanda kakhulu kunabo bonke, njengoba wonke amathuluzi ecacisiwe anokwethenjelwa futhi asetshenziselwa ukusetshenziswa ).
Noma yikuphi umehluko?
Kungani kufanele uqalise ngokukhethekile ngeThuluzi legama elingukhiye le-giant search world giant, bese nje uqhubeke nokuthatha elinye, ngokuqondile ngokukhethekile igama eliyisihluthulelo umsizi? Kungenxa yokuthi uma kuziwa ku-
Amagama angukhiye angundoqo ama-keywords ayinhloko - kuhloswe ukuba kuboniswe ngqo ngokubona okucacile, isibonelo ngezihloko zomkhiqizo, izincazelo, amaphuzu amashadi ngomkhiqizo, njll.
Amagama angukhiye efihliwe - akukho-brainer ukuthi lokhu Isigaba samagama angukhiye siphila emuva kumakethe ye-Amazon. Nakuba zingabonakali kokubili abathengi bangempela, futhi izinjini zokusesha, amagama angukhiye afihliwe asaqhubeka enza izwi lawo futhi asize uhlu lwakho lwemikhiqizo lubeke kahle kakhulu. Ngokuvamile, lokhu kufaka phakathi izilinganiso ezifanayo, izibonelo ezihlukahlukene slangomthengisi futhi ngezinye izikhathi ngisho namazwi angenasipiliyoni angasetshenzisiwe, asetshenziswe kabanzi njengemigomo yemboni - ngakho-ke yingakho lesi sigaba samagama angukhiye angeke sibandakanywe, isibonelo, ngezihloko ezisemthethweni.
Ukufakwa ohlwini kwe-Anatomy ku- i-Amazon.com kuya ku-D Shintsha isisetshenziswa sakho
Uma i-pool yakho eyinhloko yamagama angukhiye akhethiwe ekulungele, yisikhathi sokuba nakho konke okukhona ngekhasi lakho lemininingwane yomkhiqizo. Futhi isakhiwo esiyinhloko sohlu lwekhasi lomkhiqizo esizokwenza silungiselele ngaso sonke isikhathi sakhiwe isethi efanayo yezakhi ezibalulekile. Ukucabangela ukuthi kuhloswe ukuba kugcwaliswe ngamagama angukhiye asemqoka - okokuqala nokuphambili - nansi okudinga ukunakekelwa kwakho okucacile laphaya.
Isihloko sokufakwa ohlwini esihlanganisa isihloko esiyinhloko sokuthengiswa kwempahla.
Ama-Bullet Points enikeza incazelo yomkhiqizo ohlanzekile futhi ocacile futhi usebenzise izincomo.
Incazelo yomkhiqizo eqinisweni imelela inguqulo egcwele kakhulu ye-Bullet Points.
Izithombe eziyinhloko ezisekela zonke umkhiqizo ukunikeza ukulandisa okuwusizo okubhekayo abathengi abaphilayo.
Amathiphu okuthuthukisa ama-Amazon.com Ukuphakanyiswa okusezingeni
Asikho isidingo sokuthi isihloko somhlahlandlela wakho womkhiqizo cishe indawo ebaluleke kunazo zonke lapho kudingeka ukuthi ifakwe amagama angukhiye ayisisekelo ngangokunokwenzeka. Kodwa-ke, phawula ukuthi akufanele neze ube nokuhlunga kwemikhiqizo yakho ehlelwe ngamagama angukhiye. Ngakho-ke, ukuqinisekisa ukuthi isihloko sakho somkhiqizo sinengqondo, yenza ukuhlola okuphindwe kabili ukuze ube nakho konke okulandelayo:
Faka amagama angukhiye abalulekile eduze ekuqaleni kokunciphisa umyalo wokubaluleka.
Ubude besikhundla somkhiqizo kuvunyelwe ukuba lufike ezinhlamvu ezingu-200..Ngakho-ke kuwukuphela kwakho ukuthi unqume ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani.
Yonke incwadi yokuqala yegama ngalinye lesihloko kufanele ilandelwe njalo.
Amanani kufanele aphethwe ngamanani (isb., I-100 izoba kuhle, futhi ikhulu - hhayi nakancane).
Ngenkathi idatha ejwayelekile yokuthunyelwa kwezilinganiso ngokuvamile ifika ngokuzenzakalelayo, usayizi womkhiqizo akufanele neze ube yisidingo (Yebo, ngaphandle uma kungumsebenzi ofanele ngempela futhi obalulekile).
Cishe into efanayo ukucacisa umbala - akudingeki ukuba ubekwe kuwo wonke imikhiqizo, kuphela kulabo izinto.
Ungase ujwayele lokhu, kepha ngisafaka uhlu oluthile lwezincomo - okungenani ngenxa yokuphelela. Ngakho-ke, uma uchofoza noma yikuphi uhlu lomkhiqizo kuleyo ndawo emakethe egcwele kakhulu - futhi uhlelwe ngqo kwisigaba sekhasi lewebhu ngamaphoyinti e-bullet. Ngokusekelwe ku izinhlahlandlela ze-Amazon.com , qaphela izincomo ezilandelayo uma ukhetha ukuthi iyiphi amaphuzu amasha angeke afaneleke kuwe:
Uhlu lwamaphoyinti we-bullet kufanele lwakhiwe nge-top-useful idatha ewusizo futhi akukho okunye okunye.
Ukwaziswa okunye okuchazayo kufakiwe KUFANELE kube yinto ebaluleke kakhulu kuphela.
Bhala uhlu lwezici ezinkulu zomkhiqizo nezinzuzo ngendlela emfushane, ehlanzekile futhi ecacile.
Incazelo yomkhiqizo & Izithombe
Cishe konke okushiwo ngencazelo yomkhiqizo nokwenza kahle isithombe kufakazela. Yingakho ngizokukhombisa nje isifinyezo esifushane sokuthola okunamandla futhi KUFANELE-ube nemaphuzu okugcizelela:
Incazelo yomkhiqizo - ecebile ngamagama angukhiye, kusho ukuthi kube okuyingqayizivele. Ekhuluma ngamaphuzu abalulekile obuhlungu bamakhasimende, incazelo enhle yomkhiqizo kufanele ihlanganise yonke idatha efakwe ohlwini ngokugcwele futhi ngokugcwele.
Umkhiqizo wezithombe - kuphela ukukhawulelwa ukuthi i-Amazon ivumela zonke izinhla zomkhiqizo ukuba zifakwe ngaphandle kwezithombe eziyisishiyagalolunye ezengeziwe. Mhlawumbe akuyona i-no-brainer, kodwa namanje ngincoma ukuthi ucabange ikakhulukazi emaphaketheni, indlela yokuphila kanye nokusetshenziswa kwamashothi wesikhiqizo nsuku zonke - futhi usuqedile.